Bilaogera Ejipsiana roa nosamborina sy nogadraina tamin’ny toerana tsy fantatra nandritra ny iray volana latsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2019 8:15 GMT
Mpikatroka Facebook iray ao Ejipta no nalain'ireo polisy an-keriny, izay nanafika ny tranony tamin'ny 3:30 maraina, fotoana fohy alohan'ny hihiratan'ny andro. Nentina tany amin'ny toerana tsy fantatra efa ho roa andro i Rami El- Swaisi, 21 taona, raha niditra an-keriny tao an-tranony tao Giza ireo manamboninahitra sy polisy mitam-piadiana ary naka ny fananany manokana, anisan'izany ny findainy, ny solosaina finday ary ny valizy.
Mianatra any amin'ny toeram-pianarana fiteny i Rami al-Swisi ary mpikatroka tamin'ny hetsiky ny tanora 6 Aprily. Manana kaonty Facebook antsoina hoe Mahtag Akoud Hakky (mila ny zoko hiverina aho) izy izay anaovany ny fikatrohany antserasera.
Nilaza tamin'ny Tambajotra Arabo momba ny zon'olombelona i Ahmed Maher, mpikatroka tamin'ny hetsika 6 Aprily fa nahazo antso avy amin'ny manampahefana misahana ny filaminana i Rami, mangataka aminy mba hiseho eo anoloan'izy ireo. Rehefa tsy nety izy, dia norahonana imbetsaka tamin'ny fikasana hanery azy hiala amin'ny hetsika 6 Aprily izy.
Namoaka fanambarana manameloka ny fakàna an-keriny ny mpikambana ao aminy ny hetsika 6 Aprily, manamafy fa:
Nitranga iray volana taorian'ilay fakàna an-keriny bilaogera iray hafa tamin'ny 6 febroary izany, raha nisambotra an'i Dia’ Eddin Gad ny polisy efatra ary nidaroka azy teo anoloan'ny tranony tao Kattour, faritany Garbeiyah alohan'ny nitondrana azy tao anaty fiaran'ny polisy mankany amin'ny toerana tsy fantatra.
Mpanoratra ao amin'ny bilaogy Sawt Ghadib (Feo tezitra) i Dia’ Eddin Gad. Tsy namoaka ny anton'ny fisamborana azy na ny toerana nitazonana azy ny polisy.
Manohy ny fitokonany tsy hihinan-kanina ilay bilaogera voafonja Muhammad Adel, manohitra ny fametrahana azy amin'ny toerana mitokana sy ny fampijaliana ataon'ny manampahefanan'ny fonja aminy, izay tsy mamela azy hiala ao amin'ny efitra misy azy, ka mampidi-doza ny ainy. Nanomboka ny fihetsiketsehany nanomboka tamin'ny faha-28 febroary tao amin'ny fonjan'i Tora Farm i Adel, ary hatramin'izao, tsy nisy ny fanadihadiana natao mba hiarovana ny ainy amin'ny loza aterak'izany.